Fialana miafina: Peter Pan Neverland
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Fialana miafina: Peter Pan Neverland
nosy boulder sary nalain'i rob collins 20 04 19 1
An tsokosoko Tourist ary nahita mpanoratra mpanoratra Peter Pan Neverland. Mitady fandosirana miafina?
Tsy mila mankany intsony ianao Disney Park hahita an'i Peter Pan Neverland. Nosy kely tropikaly any amin'ny Ranomasimbe Indianina no mety ho aingam-panahy ho an'i Peter Pan's Neverland, hoy ny porofo vaovao, misy fitoviana eo amin'ny tontolon'ny sary an-tsaina sy ny Nosy Boulder ao amin'ny Vondronosy Mergui.
Nosy kely tropikaly any amin'ny Ranomasimbe Indianina no mety ho aingam-panahy ho an'ny tantara noforonin'i Peter Pan Neverland, hoy ny porofo vaovao. Hitan'ny mpikaroka ny fitoviana mampitolagaga eo amin'ny Neverland an-tsaina noforonin'ny mpanoratra JM Barrie sy ny nosy lavitra iray izay tsy azo naleha teo amin'ny Ranomasina Andaman antsoina hoe Nosy Boulder.
Ny fahitana dia nitarika ho amin'ny tombantombana momba ny niandohan'ny Neverland avy amin'ny mpahay tantara, mpanao sarintany, manam-pahaizana momba ny haisoratra ary mpanoratra mpanoratra. Ny filazàna fa ilay nosy lao sy mitafy ala dia mety hitaona ny mpanoratra Barrie notohanan'ny rohy mahaliana maro, hoy ny mpanoratra mpanoratra Keith Lyons, izay efa nanadihady ny raharaha hatramin'ny tapaky ny taona 2018.
"Na dia tsy nitsidika an'i India na Azia aza ilay mpanoratra tantara an-tsehatra sy mpanoratra tantara an-tsehatra skosezy, dia misy fifandraisana marimaritra iraisana izay milaza fa ny mpanoratra an'i Peter Pan dia nahalala ny momba ilay nosy, izay tao anatin'ny fanjakan'ny mpanjanatany britanika taloha."
Ny fikatsahana hitady ny tena tontolo Neverland of Peter Pan, Wendy, the Lost Boys ary Tinkerbell dia nipoitra roa taona lasa izay raha ny sari-tanin'ny Neverland amin'ny fomba fahagola dia nifanaraka tamin'ny sary zanabolana ao amin'ny Nosy Boulder ao amin'ny Archipelago Mergui amoron-tsirak'i Myanmar. "Tamin'ny fotoana nahitako ny sari-tany dia nahagaga ahy fa nitovy endrika tamin'ny nosy Boulder any amin'ny Nosikely Mergui", hoy ny Bjorn Burchard avy ao amin'ny Moby Dick Tours avy any Norvezy. “Nahagaga fa nitovy ny endrik'izy ireo, mitovy endrika amin'ny torapasika, bay, morontsiraka, ala, farihy, morontsiraka ary vatolampy.”
Ny fitoviana hafahafa amin'ireo nosy dia nohamafisin'ny manampahaizana maro, ao anatin'izany ny cartographer sy mpandrefy ny tafika Indiana taloha. Ilay nosy fasika fotsy sy haran-dranomasina dia nantsoina tamin'ny voalohany tamin'ny taonjato faha-19 avy amin'ny mpandinika hydrôsezy Scottish malaza James Horsburgh. Ny Nosy Mergui Archipelago dia toerana fialantsasatra tsy misy ahiahy ho an'i Brits nalefa tany Burma, mitovy amin'ny anjara asan'ny Neverland ho toerana fahazazana mandrakizay, fialambola ary tsy fahafatesana. Na izany aza, nanomboka ny taona 1940 dia tsy voafetra ho an'ny rehetra ny vondrona nosy noho ny antony ara-politika sy ara-tafika.
Tao anatin'ny folo taona lasa izay vao navela niditra tao amin'ny vondronosy nosy 800 tsy nisy mponina ny avy any ivelany, izay manakaiky an'i Myanmar sy atsimon'i Thailand. Toeram-pivarotana notarihan'ny fiarovana kely Boulder Bay Eco Resort nisokatra vao tsy ela akory izay.
Ny Nosy Horsburgh, miaraka amin'ny endriny mampiavaka azy, dia misongadina eo amin'ny tabilao na sarintany an-dranomasina voalohany noho ny toerana misy azy eo amin'ny sisiny ivelany amin'ny nosin'ny haran-dranomasina mamitaka. "Tokony ho nahalala ny zava-bitan'i Horsburgh ho an'ny East India Company i Barrie, ary tamin'ny famoronana nosy dia angamba izy no nampiasa ilay nosy nanaovana fanadihadiana sy notononin'ilay mpandinika rano ho aingam-panahy," hoy i Burchard.
Ny mpaka sary sy mpandinika ny tafika Indiana teo aloha, Col Sanjay Mohan, avy amin'ny Map & Locations, izay nandinika ny sarintanin'ny nosy tantara foronina sy sary zanabolana ao amin'ny Nosy Boulder, dia nilaza fa ny piozila momba ny toerana nisy an'i Neverland sy ny niandohany dia manambara betsaka ny amin'ny anjara asan'ny sary an-tsaina sy ny tantara ao famoronana sari-tany. "Taloha, nisy sarintany manan-tantara noforonin'ireo mpaka sary avy amin'ny tantaran'ny mpitsidika, manasongadina fa ny sary an-tsaina sy ny tantara foronina dia ampahany lehibe amin'ny sary an-tsary. Ny fitovian'ny nosy tena any amin'ny Ranomasina Andaman mankany amin'i Peter Pan's Neverland dia mety ho kisendrasendra fotsiny, na Mety ho izy satria ilay mpanamboatra sarintany dia naka aingam-panahy avy amin'ilay sarintany na sarintany nosy Boulder. ”
Nilaza i Lyons fa misy mihoatra ny fitoviana amin'ny endrika nosy Boulder amin'ireo sary voalohany an'i Neverland. “Tsy dia mitovy loatra ilay nosy, ny toerana misy ny nosy, ny anarany teo aloha, ary ny fisian'ny jiolahin-tsambo, karana, voay - ary na dia ny zazavavindrano aza - dia manohana ny teôria fa tsy toerana lavitra sy noforonina fotsiny i Neverland ”, Hoy i Lyons. “Ankoatra izany, nisy fikotranan'i Skotika sy literatiora matanjaka niaraka tamin'i Burma, ary i Barrie dia voataonan'ireo namany sy mpiara-belona taminy izay niaina na nitsidika an'i Birmania, anisan'izany i Rudyard Kipling poeta izay mety nandalo ilay nosy.”
Mpanoratra sy mpaka sary amin'ny fizahan-tany Dave Stamboulis, mpanoratra ny 'Odysseus' Last Stand ', izay nitsidika ny Nosy Boulder ho an'ny USA Today dia nilaza fa misy toetra Neverland momba ny nosy. “Betsaka ny toerana andehanana, mitokana, ary azo antoka fa tsy misy olona hilaza aminao izay tokony hatao na tsy hatao. Tsara be ny morontsiraka raha jerena ny karazana toerana paradisa Robinson Crusoe. Toy ny any Neverland dia mitady toerana nofinofy foana ny mpandeha. Ireo nofinofy ireo, na nofinofy farafaharatsiny, mazàna dia misy toerana madio sy tsy voakitika na farafaharatsiny farafaharatsiny fampiasa amin'ny carte postales. Tena manakaiky i Boulder satria tsy voaloto na simba toy ny ankamaroan'ny torapasika any Azia atsimo atsinanana. ”
"Ny lazan'ny Mergui Archipelago momba ny jiolahin-tsambo mampidi-doza sy ny gypsies an-dranomasina mitanjozotra dia azo antoka fa manampy ny raharaha any amin'ny Nosy Boulder ho aingam-panahy ho an'i Neverland", hoy ny mpanoratra mpanoratra Christopher Winnan, mpanoratra ny 'Around the World in Eighty Documentaries'. Ny voay misy sira dia mitoetra amin'ny faritra ivoahan'ny faritra, miaraka amin'ny Nosy Ramree akaiky indrindra no nosy mampidi-doza indrindra eto an-tany, mitana ny firaketana an'izao tontolo izao noho ny fahafatesan'ny fanafihana voay, ary iguanas izay lehibe tokoa ka noheverin'izy ireo ho voay, misy zavaboary hafahafa hafa hita manerana ny ranomasina Andaman. .
“Kely dia kely ny zavatra fantatra momba ireo nosy lavitra amin'ny Nosy Mergui, ka iza no hilaza fa ny Nosy Boulder mihitsy dia mety tsy honenan'ireo mponina tsy mahazatra intsony? Tinkerbell sy ny Lost Boys dia mety tsy ho sahiran-tsaina eo amin'ireo vatan-kazo poakaty, fa ny clownfish sy ny parrotfish dia mbola milalao sy mitady any amin'ny haran-dranomasina. "
Maninona ireo Iranianina sy Amerikanina no mpinamana tsy misy ady politika